टि–२० विश्वकप छनोटः कस्तो छ नेपालको प्रतिस्पर्धीको वरियता? - Everest Dainik - News from Nepal
टि–२० विश्वकप छनोटः कस्तो छ नेपालको प्रतिस्पर्धीको वरियता?
काठमाडौं । सिंगापुरमा आयोजना हुने आईसीसी टि–२० विश्वकप एसिया फाइनलको लागि नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोली त्यसतर्फ जाने तयारीमा छ । मलेसिया विरुद्धको टि–२० सिरिज जितेर आत्मविश्वासले भरिएको नेपाली टिमको लक्ष्य विश्वकपमा छनौट हुनेछ ।
विश्वकप २०२० मा अष्ट्रेलियामा हुने छ । नेपालले विश्वकप छनोटका लागि जूलाई २२ देखि २८ तारिखसम्म हुने एसिया फाइनल खेल्दै छ । एसिया फाइनलमा नेपालसहित सिंगापुर, मलेसिया, कतार र कुवेत पनि छन् ।
याे पनि पढ्नुस क्रिकेट प्रशिक्षक पटवालले दिए राजीनामा
यदि नेपाल फाइनलको शीर्षमा पुगे विश्वकपको ग्लोबल छनोटमा स्थान बनाउने छ । ग्लोबल छनोट ११ अक्टोबरदेखि ३ नोभेम्बरसम्म यूएईमा हुँदैछ । यूएई भने आयोजकको रुपमा स्वतः ग्लोबल छनोटमा प्रवेश गरिसकेको छ ।
एसिया फाइनलमा नेपालको पहिलो खेल कतारविरुद्ध छ । यी दुई टिमबीचको खेल २३ जूलाईमा हुँदैछ । यस्तै नेपालले दोस्रो खेलमा मलेसियाविरुद्ध २४ जुलाई, २७ जुलाईमा कुवेत र २८ जूलाईमा सिंगापुरसँग खेल्ने छ ।
एसिया फाइनल खेल्ने पाँच राष्ट्र मध्ये नेपाल मात्र एकदिवसीय मान्यता प्राप्त पाए देश हो । अन्य टिमभन्दा नेपाललाई बलियो मानिएकाले उपाधि जित्दै ग्लोबल छनोटमा पुग्ने आकलन पनि गरिएको छ ।
याे पनि पढ्नुस टि–२० विश्वकप छनोटः कुवेतविरुद्व मलेसियाको शानदार जित
आईसीसी वरियतामा नेपाल ११ औं स्थानमा छ । नेपालपछि वरियतामा कतार २१ औं स्थानमा छ । यस्तै आयोजक सिंगापुर २३ औं, कुवेत २८ औं र मलेसिया ३५ औं स्थानमा रहेका छ ।
एसिया फाइनलको शीर्ष स्थानमा रहने टिमले आउँदो नोभेम्बरमा यूएईमा हुने आईसीसी टि–२० विश्वकप छनोटमा स्थान पक्का गर्नेछ ।
याे पनि पढ्नुस त्रिकोणात्मक सिरिजः नेपाली टोलीको घोषणा, को–कोले पाए मौका?
क्षेत्रिय छनोटबाट आएका अफ्रिका, अमेरिका, एसिया, युरोप र पूर्वी एसिया प्यासिफिकका राष्ट्रसंगै गत संस्करणको टि–२० विश्वकप खेलेका राष्ट्र हङकङ, आयरल्याण्ड, नेदरल्याण्ड, ओमान, स्कटल्याण्ड, आयोजक युएई र जिम्बाबे गरि १४ राष्ट्रको सहभागिता हुने छन् । विश्वकप छनोटमा शीर्ष ६ स्थान सम्मका राष्ट्रले आगामी बर्ष अस्ट्रेलियामा हुने आईसीसी टि–२० विश्वकपमा सहभागिता जनाउने मौका पाउने छन् ।
ट्याग्स: टि–२० विश्वकप छनोट, नेपाली क्रिकेट टिम